Ndagadzirira Kubva Pamba Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
Ndagadzirira Kubva Pamba Here?
Nei Ndichida Kubva Pamba?
Chinangwa Changu Ndechei?
Chinangwa chaMwari chepakutanga chaiva chokuti vaduku vakure vosiya baba naamai vavo vova nemhuri dzavo. (Genesisi 2:23, 24; Mako 10:7, 8) Asi ungaziva sei kana wanyatsogadzirira kubva pamba? Funga nezvemibvunzo mitatu.
Tarisa zvakanyorwa pasi apa. Zvibvunze kuti, ‘Ndezvipi zvikonzero zvinokosha zviri kuita kuti ndide kubva pamba?’
Ndinoda kutiza matambudziko epamba
Ndinoda kuva nerusununguko rwakawanda
Ndinoda kuremekedzwa neshamwari dzangu
Ndinoda kubatsira shamwari yangu inoda wokugara naye
Ndinoda kuita basa rokuzvipira kubatsira vamwe kune imwe nzvimbo
Ndinoda kudzidza kuti ndingagara sei ndoga
Ndinoda kurerutsira vabereki vangu panyaya dzemari
Zvikonzero zviri pamusoro apa hazvina kumboipa. Mubvunzo ndewokuti, Chinangwa chako ndechei? Somuenzaniso, kana uchida kubva pamba nokuti chete unoda kusununguka kuita zvaunoda, ungangozoshamisika!
Danielle uyo akambobva pamba kwekanguva paaiva nemakore 20, akadzidza zvakawanda kubva pane zvakaitika kwaari. Anoti: “Munhu wose anototi ararame aine zvimwe zvaanorambidzwa kuita. Kana uchirarama woga, nguva yaunoshanda kana kuti kushaya mari zvichakutadzisa kuita zvaunoda.” Usarega vamwe vachiita kuti umhanyirire kusarudza kubva pamba.—Zvirevo 29:20.
Kubva pamba kwakafanana nokufamba musango—unofanira kuziva zvinhu zvinozokubatsira kuti urarame
Kubva pamba uchinogara woga kwakafanana nokufamba musango. Ungaenda here kunogara musango usingagoni kudzika tende, kubatidza moto, kubika kana kuverenga mepu? Kwete! Asi vechiduku vakawanda vanobva pamba vaine ruzivo rushoma runodiwa pakutarisira imba.
Mambo akachenjera Soromoni akati “munhu ane njere anofunga nezvenhanho dzake.” (Zvirevo 14:15) Kuti ubatsirwe kuona kana wagadzirira kunogara wega, funga nezvezvinhu zvinotevera.
Kushandisa mari zvakanaka: Serena ane makore 19 anoti, “Handisati ndambozvibhadharira chero chinhu chipi zvacho. Ndinotya kubva pamba ndozobhajeta mari yangu ndega.” Ungadzidza sei kushandisa mari zvakanaka?
Chimwe chirevo cheBhaibheri chinoti: “Munhu akachenjera achateerera owana mumwe murayiridzo.” (Zvirevo 1:5) Saka wadii kubvunza vabereki vako kuti zvingada marii pamunhu mumwe chete pavhiki yokubhadhara rendi kana kuti chikwereti chemba, kutenga zvokudya, uye kutarisira motokari kana kubhadhara mari yokufambisa? Wadaro chivakumbira kuti vakudzidzise kuti kubhajeta mari uye kubhadhara mabhiri zvinoitwa sei.
Unyanzvi hwokuita mabasa epamba: Brian ane makore 17 anoti kuzviwachira mbatya dzake ndicho chinhu chinonyanya kuita kuti asada kubva pamba. Ungaziva sei kana wagadzirira kuzviriritira? Aron ane makore 20 anopa zano iri: “Edza kumborarama kwevhiki uchiita sokuti uri woga. Idya chete zvokudya zvaunozvibikira woga, zvaunozvitengera woga uye zvaunotenga nemari yaunenge watambira. Pfeka mbatya dzaunenge wawacha uye waayina wega. Chenesa pose paunenge wasvibisa mumba. Uye edza kuenda kwose kwaunoda uri woga pasina anokuendesa kana kuzokutora.” Kutevedzera zano iri kuchakubatsira pazvinhu zviviri: Zvichaita kuti (1) uve neunyanzvi hunokosha uye (2) uwedzere kukoshesa basa rinoitwa nevabereki vako.
Kugarisana nevamwe zvakanaka: Unowirirana nevabereki vako uye vana vomumba menyu here? Kana zvisina kudaro ungafungidzira kuti upenyu hungava nyore kana ukanogara neshamwari yako. Asi funga zvinotaurwa naEve ane makore 18 kuti: “Shamwari dzangu mbiri dzakaenda kunogara dzose. Vaiwirirana chaizvo vasati vava kugara vose asi vakanga vasingachawirirani pavakanga vava kugara vose. Mumwe wacho aiva noutsanana asi mumwe aine uchapa. Mumwe wacho ainyanya kukoshesa zvokunamata asi mumwe wacho akanga asingadaro. Vakanga vasingawirirani!”
Ungaitei kuti izvi zvisaitika? Erin ane makore 18 anoti: “Unogona kudzidza zvakawanda nezvekugarisana nevanhu uchiri pamba. Unodzidza kugadzirisa matambudziko uye kubvuma zvinodiwawo nevamwe. Ndakacherechedza kuti vaya vanobva pamba kuti varege kunetsana nevabereki vavo vanenge vachitiza matambudziko panzvimbo pokuti vadzidzire kuagadzirisa.”
Purogiramu yokunamata: Vamwe vanobva pamba vachitiza purogiramu yevabereki vavo yokunamata. Vamwe vanenge vachida chaizvo kuramba vaine purogiramu yakanaka yokudzidza Bhaibheri uye yokunamata asi pasina nguva vanotanga kuita zvakaipa. Ungaita sei kuti ‘kutenda kwako kusaparara sengarava yaparara’?—1 Timoti 1:19.
Iva nepurogiramu yakanaka yokudzidza Bhaibheri uye kunamata woomerera pairi. Wadii kuita zvokunyora purogiramu yako yokunamata pakarenda woona kuti unogona kuitevedzera here kwemwedzi usingaiti zvokufudzwa nevabereki vako?
Uri kuda kubva pamba kuti utize matambudziko here? Kana kuti haudi kuva pasi pevabereki here? Kana zvakadaro, unenge uchinyanya kutarisa zvauri kusiya kwete kwauri kuenda. Kuita izvozvo kwakafanana nokuedza kutyaira motokari maziso ako akati ndee pagirazi rinoratidza zviri shure—uri kunyanya kuisa pfungwa dzako kwauri kubva zvokuti hauoni zviri mberi. Unodzidzei? Usangonyanya kufunga nezvekubva pamba—isa pfungwa dzako pachinangwa chinobatsira.
Chero chingava chinangwa chako, nyatsofungisisa nezvazvo. Chimwe chirevo cheBhaibheri chinoti, “Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira, asi munhu wose anokurumidzira zvinhu achashayiwa njere.” (Zvirevo 21:5) Teerera zano revabereki vako. (Zvirevo 23:22) Nyengetera nezvenyaya yacho. Uye paunenge uchisarudza zvokuita, funga mashoko eBhaibheri achangobva kukurukurwa.
Mubvunzo chaiwo hausi wokuti ‘Ndagadzirira kubva pamba here?’ asi ndowokuti ‘Ndagadzirira kunogara ndiri ndoga here?’ Kana mhinduro yemubvunzo wokupedzisira iri hungu, zvinoreva kuti unenge wagadzirira kunorarama usina vabereki vako.